Dawladda Somalia oo ku tilmaantay Goobihii la weeraray Ramadaanka inaysan ahayn kuwo Istaraatiiji ah. – Hornafrik Media Network
Wasiirka Amniga ee Dawladda Somalia oo ka hadlayay SNTV ayaa sheegay in horumar laga gaaray Hawlgaladdii Xasilinta Amniga Caasimadda mudadii koobnayn ee ay socdeen, Wuxuuna Wasiirku ku faanay inay ka suuliyeen Caasimadda Hubkii Sharci Daradda ahaa iyo Suuqyaddii lagu kala iibsanayay, Sidoo kalana ay ku guulaysteen inaan lagu dhex arkin Muqdisho Qori ka culus AK 47.
Agaasimaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, C/laahi Sambaloolshe ayaa isna ku dooday in Ramadaankii Sannadkii hore ay dhaceen 28 Qarax oo u dhiganta in Maalin kasta uu Qarax dhacayay, ayna ku dhinteen in ka badan 80 Qof, sidoo kalana ay dhaceen isla Ramadaankaas Sannadkii hore 12 Dil oo Qorshaysan. taas badalkeedana wuxuu sheegtay in Sannadkan ay dhaceen 3 Qarax oo kaliya oo ay ku dhinteen tiro uu ku sheegay 40 Qof iyo Dhaawac 62 Qof, iyadoo Hornafrik ay diiwaan galisay 3 daasi Qarax dhimashadda 68 Qof. halka Dilalka qorshaysana uu ku sheegay Agaasimuhu in 80% ay hoos u dhigeen.
Goobaha la bartilmaameedsaday Agaasime Sambaloolshe wuxuu ku tilmaamay kuwa aan Istaraatiiji ahayn oo ay Shacab ku sugnaayeen. taasoo ka dhigaysa inaysan Muhiim u ahayn Hay’adaha Ammaanka goobaha la weeraray ee lagu xasuuqay Shacabka.
in ku dhow 100 qof ayaa ku dhimatay Qaraxyo iyo Dilal Qorshaysan oo ka dhacay Bishan Ramadaan Magaaladda Muqdisho, iyadoona ay si xoog leh u socdaan Hawlgaladda Xasilinta Caasimadda oo u muuqday inaysan saamayn Kooxaha Argagixisadda ah.
Madaxda Dawladda Somalia oo Hambalyo u diray Shacabka Munaasibadda Ciidda Awgeed.